ओलीले अब आफ्ना आलोचकविरुद्ध सत्ताका सबै संयन्त्र प्रयोग गर्नुहुन्छ | Hindu Khabar
तर, स्पष्टीकरण दिन तीन दिनको म्याद दिनुभएको छ, त्यसभित्र जवाफ दिने विषयमा के सोच्नुभएको छ ?
उहाँको हैसियत नै वैधानिक छैन भने उहाँले दिएको म्यादको विषयमा त हामीलाई सरोकार भएन । तर, उहाँले उठाएका प्रश्नमा हामीले दुनियाँलाई त पक्कै बताउनुपर्छ । किनभने उहाँले अफवाह सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ । दुनियाँलाई उहाँले निरन्तर भ्रमित पारिराख्नुभएको छ । त्यसैले उहाँले चालेका कदमबारे दुनियाँलाई स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । त्यसका लागि हामी केही लेख्छौँ ।
२८ कात्तिकमा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले १९ पृष्ठको जुन अभियोगपत्र पार्टीमा दर्ता गर्नुभयो, ओलीले त्यस्तो ‘अराजनीतिक, तथ्यहीन र शत्रुतापूर्ण आरोप’ लेख्न सघाएको भन्दै तपाईंहरूमाथि कारबाही किन नगर्ने भनेर सोध्नुभएको छ । त्यसमा तपाईंहरूको जवाफदेहिता के हो ?
न्याय, कानुन र विधिको कखरा बुझेको मान्छेले उहाँले उठाउनुभएको प्रश्नलाई सजिलै मूर्खतापूर्ण भन्छ । अदालतले हामी सबैलाई फर्काएर २ जेठ ०७५ मा पु¥याएको छ, उहाँले हामीलाई २८ कात्तिकको पत्रको बारेमा स्पष्टीकरण सोध्दै हुनुहुन्छ । यसबीचको कुरा गर्ने हो भने त उहाँले कैयौँ स्पष्टीकरण दिनुपर्छ ।
नेकपाकालको मात्र होइन, एमाले पुनस्र्थापित भएपछि पनि ३ चैतमा सार्वजनिक निर्देशन दिँदादिँदै पनि ४ र ५ चैतमा एमालेको झन्डा, लोगो, चिह्न र नाम दुरुपयोग गरेर राष्ट्रिय भेला गर्नुभयो भन्ने छ । त्यो विषयमा पनि प्रश्न सोधिएको छ नि ।
दुरुपयोग हामीले गरेका होइनौँ, उहाँले एमालेको झन्डा र लोगोलाई गुटको कब्जामा लिनुभयो । त्यसविरुद्ध हामीले पार्टीको झन्डा उठायौँ । २८ फागुनमा उहाँले गुटको जुन भेला गर्नुभयो, विधान संशोधन गर्नुभयो, कमिटी विस्तार गर्नुभयो, त्यो भनेको पार्टी र झन्डालाई कब्जा गर्न खोजिएको हो । हामीले त्यहाँबाट खोसेर पार्टीको झन्डालाई माथि उठाउन खोज्यौँ । त्यसैले प्रश्न हामीमाथि होइन, उहाँसँग सोधिनुपर्छ ।
२८ फागुनको बैठक तपाईंहरूले थाहा पाएनौँ भन्नुभयो, तर ७ चैतमा बैठक डाकिएको छ, थाहा पाएनौँ भन्न पाइनेछैन भनेर अध्यक्ष ओलीले टेलिभिजनबाट सार्वजनिक आमन्त्रण गर्नुभएको थियो । तैपनि तपाईंहरू किन जानुभएन ?
धुम्बाराहीमा केपी ओलीसँग वार्ता हुँदा हामीले विधानविपरीतका निर्णय फिर्ता लिनुस् भन्यौँ । २८ फागुनको अवैधानिक बैठकले गरेका निर्णय खारेज गर्नुस्, हामी आउँछौँ भनेका थियौँ । अवैधानिक निर्णय गर्ने अनि त्यो निर्णयका आधारमा बोलाउने बैठक कसरी वैधानिक हुन्छ ? त्यहाँ अरू धेरैजना फिर्ता लिन करिबकरिब तयार भएका थिए । जसले अझै पनि नैतिकताको, मूल्यको राजनीति गर्दै छन्, ती साथीहरू करिबकरिब तयार भएका थिए । तर, ओली स्वयं त्यो निर्णय त भयो–भयो भनेर निस्कनुभयो । त्यसैले अहिले उहाँले जे भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो फर्जी हो, षड्यन्त्र हो, झुक्याउने जालझेल हो ।
तपाईंहरू पार्टीभित्र संस्थापनसँग पनि लडिरहनुभएको छ । तर, नेकपा एमाले भइसकेपछि पनि निर्वाचन आयोगमा किन पुग्नुभयो ? लड्ने त पार्टीभित्र होला नि ?
हाम्रा सबै ठुल्ठूला निर्णय निर्वाचन आयोगमा स्वतः जान्छन् । अस्ति (२८ फागुनमा) उहाँले गुटको भेला गर्नुभयो र त्यसलाई पार्टीको बैठक भन्नुभयो । त्यो ओली गुटकै भेला हो भनेर हामीले कानुनी रूपमा बताउनु जरुरी थियो । अवैधानिक रूपमा विस्तार भएको कमिटीले गरेका निर्णय कानुनविपरीत हुन्छन् भनेर निर्वाचन आयोगमा दर्ज गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले हामी गयौँ ।
माधव नेपालहरू सके एमाले कब्जा गर्नुहुन्छ, नसके विद्रोह गर्नुहुन्छ भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा किन मौन बस्नुभएको हो ? यसमा तपाईंहरूमाथि शंका छ, यो त स्पष्टीकरणको विषय नै बनेको छ नि ।
ओलीजीकै बारेमा कसले कहाँ के–के भने, विदेशीले के भने, गुप्तचरले के भने भनेर सुनिएका कुरालाई आधार बनाएर हामीले उहाँसँग कुरा गरेका छैनौँ । त्यसैले प्रचण्डको अभिव्यक्तिको बहानामा हामीमाथि कारबाही गर्न खोज्नु षड्यन्त्र मात्र हो । यदि उहाँ एउटा नैतिकवान, इमानदार अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने प्रचण्डसँग सोध्नुपथ्र्यो– हाम्रो पार्टीका बारेमा किन बोल्यौ भनेर । हामीसँग पनि यो विषयमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो । तर, बाटोका कुरा उठाएर हामीमाथि हिलो छ्याप्ने जुन षड्यन्त्र गरिँदै छ, त्यो फेरि पनि चिल आयो भनेर कुखुरा चोर्ने दाउ हो ।
५ पुसमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो, आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध छापामार शैलीमा अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता किन गरियो ? स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ, तपाईंहरूको जवाफ के हो ?
उहाँले संसद् विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सैद्धान्तिक रूपमा विरोध गर्ने र समर्थन गर्ने मान्छेहरू बाँडिइसकेका थिए । संसद् जोगाउन सकिन्छ कि भनेर केही साथीहरूले प्रयत्न गरेका थिए । यद्यपि म त्यतिवेला सरकारमै थिएँ, त्यसैले त्यसमा संलग्न थिइनँ । तर, साथीहरूले जे गरेका थिए, त्यो आवश्यक थियो । संसद् विघटन गर्ने कुराचाहिँ ठीक, अनि त्यसलाई बचाउन गरिएको प्रयत्न बेठीक भन्ने प्रश्नै हुँदैन ।
समाजमा प्रश्न के पनि छ भने हिजो नेकपामा प्रचण्ड र माधव नेपालसँग जतिवेला सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, संसदीय दल सबैतिर बहुमत हुँदा ओलीलाई चार–पाँचपटक कारबाही भयो, साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरियो । अहिले उहाँसँग बहुमत हुँदा तपाईंहरूमाथि कारबाही भयो त के बेठीक भयो ?
जतिखेर उहाँमाथि कारबाही भयो भनेर अहिलेसम्म चिच्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यतिखेर पार्टी नै दुईवटा भइसकेका थिए । दुईवटा विधान थिए । आ–आफ्ना विधानअनुसार दुवै पार्टीले काम गरे । किनकि त्यतिवेला उहाँले पनि बाटोबाट समातेर ल्याएर १२–१३ सयजनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनुभएको थियो । त्यो एउटा पार्टीको रूपमा उहाँले गर्नुभयो, हामीले अर्को पार्टीबाट काम गर्‍यौँ । तर, अहिले त नेकपा एमाले एउटै पार्टी हो । यही पार्टीको विधानअनुसार नै निर्णय गर्दा पनि उहाँ तीन–चारजना जतिको फरकले बहुमतमै हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँ डराउनुभयो र विधानविपरीत सदस्य थप्नुभयो । यसबीचमा उहाँले संसद् विघटनलगायत जे–जे कर्म गर्नुभयो, त्यसको सर्वत्र विरोध भयो । त्यसबाट सिर्जना भएको आतंकले उहाँले पार्टीको विधान संशोधन गरेको, त्यसका आधारमा २३ जना थपेकोजस्ता तमाम विषय सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँले गरेको मनोनयन र कारबाही एमालेको विधानअनुसार छैन । विधानअनुसार हुने कुनै पनि कारबाही भोग्न हामी तयार हुनेछौँ । एमालेको विधानअनुसार भएको महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको कमिटीको बैठक बसाल्नुस्, त्यहाँ पनि उहाँको बहुमत छ, कारबाही पनि त्यहीँबाट थाल्नुस् । हामी विधानभित्रै रहेर सामना गर्छौँ । तर, जसरी उहाँले देशको संविधान च्यात्नुभएको थियो, त्यसरी नै अहिले एमालेको विधान च्यात्नुभएको छ । अपराध लुकाउन उहाँ अनेक–अनेक प्रचारबाजी गरिराख्नुभएको छ ।
तपाईंले नै अगाडि भन्नुभयो, रोममा शासकहरूले ठाउँठाउँमा मान्छे झुन्ड्याएर अरू बाँकीलाई तर्साउँथे । यहाँ पनि चारजना शीर्ष नेतालाई कारबाही गर्ने भनिसकेपछि तपाईंहरूलाई समर्थन गर्ने कार्यकर्तामा कस्तो मनोविज्ञान सिर्जना होला ?
केही पनि भएको छैन । यो सबैले बुझेकै छन् । नेकपा एमालेको ठूलो पंक्तिले यो पहिले नै बुझेको हो । नवौँ महाधिवेशनमै धेरै मान्छेले बुझिसकेका थिए, अहिले अझै धेरैले बुझ्दै छन् । ओलीजीको धर्म, कर्म, योग्यता यही हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । घटना बुझ्न मात्रै बाँकी रहेको थियो, पुनर्पुष्टि भएको छ । ओलीजीले भत्काउने हो– बनाउने होइन, बिगार्ने हो– सुधार्ने होइन भन्ने एमालेका सबै कार्यकर्तालाई थाहा छ । उहाँले कुनै पनि व्यवस्था मार्ने हो, सिर्जना गर्ने होइन भन्ने कार्यकर्ताको बुझाइ झन् पुष्टि भएको छ ।
कार्यकर्ताको मनोविज्ञान कस्तो होला भनेर प्रश्न किन उठ्यो भने तपाईंहरूले आयोजना गर्नुभएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा सहभागी सांसद कृष्णभक्त पोखरेल पर्सिपल्ट बालुवाटार जानुभयो र ओलीले गल्ती गरेका हुन्, सबैले गरेका छन् भन्नुभयो । तपाईंहरूसँग ओलीप्रति आक्रोश छ, तर स्पष्ट दृष्टिकोण छैन भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
योभन्दा स्पष्ट दृष्टिकोण के हुनु ? अदालतले एमालेलाई २ जेठ ०७५ मा पुर्‍यायो । हाम्रो पार्टीको जीवन त्यहीँबाट सुरु गरौँ, हाम्रो स्पष्ट भनाइ यही हो । योजति स्पष्ट भनाइ के हुन सक्छ ? योभन्दा धेरै हामीले मागेको पनि होइन, खोजेको पनि होइन । हामीले खोजेको पार्टी एकता हो । पार्टी एकताको आधार त्यही विधान हो, त्यही संरचना हो, जसलाई महाधिवेशनले चुनेको थियो । ओलीजीसँग जे–जति असहमति छन्, हामी पार्टीको निर्वाचित फोरममा राख्छौँ । उहाँले आफैँ निर्माण गरेका फोरममा हाम्रो आपत्ति हो । आजको नयाँ पत्रिकमा पत्रिकामा प्रकाशित छ ।